जागरणकी अभियन्ता- याेगमाया- फिचर - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ९, २०७४ लेखनाथ भण्डारी
७५ वर्षपहिले नेपालको पूर्वी पहाडमा भएको त्यस शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक विद्रोहको ज्वालाको प्रभावलाई तत्कालीन पुरुषप्रधान यथास्थितिवादी नेपाली समाज र सत्ताले स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक थियो । पुख्र्यौली थलो अरब भएकी अमेरिकी समाजशास्त्री तथा पत्रकार बारबरा निम्री अजिज योगमाया एक अद्भुत साहसी र क्रान्तिकारी महिला भएको बताउँछिन् । सन् २००१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) बाट प्रकाशित उनको ‘हेयर टु साइलेन्ट सङ : टु रेबेल वुमन अफ नेपाल’ पुस्तकमा योगमाया र उनका अनुयायीहरूको साहसिक कथा समेटिएको छ ।
संघर्षशील वीरांगना योगमायाको नेतृत्वमा गरिएको त्यति ठूलो आन्दोलन नेपाली इतिहासका पानाहरूबाट किन हटाइयो र त्यसको किन चर्चासम्म हुन पाएन ? अजिजले प्रश्न उठाएकी छन् । योगमायाको आन्दोलन अन्य कुनै सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूभन्दा कमजोर वा पछाडि छैन । नेपाल मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी योगमायाको सामाजिक सुधारको आभियानबाट आफूलाई पनि प्रभाव परेको र प्रेरणा मिलेको बताउँछिन् । योगमायाको आन्दोलन र उनको जीवन अन्सारीका लागि हृदयदेखि नै प्रभावित पार्ने घटना पनि हो । योगमाया तत्कालीन समाजमा चेतनाको ज्योति हुन् । नेपालमा भएका शान्तिपूर्ण वा अहिंसात्मक सामाजिक सुधार वा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूको इतिहासमा तुलनात्मक रूपमा यति ठूलो बलिदानको उदाहरण अर्को छैन । तर पनि किन यसलाई नेपाली इतिहासको मूलप्रवाहमा समेटिएन ? यो प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ ।
आधा शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म ओझेलमा परेको योगमायाको सामाजिक जागरणको आन्दोलन अब क्रमश: प्रकाशित हुँदै छ । नेपाल सरकारले योगमायाका नाममा हुलाक टिकट निकाल्नुका साथै राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार पनि स्थापना गरेको छ । उनका नाममा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको काम पनि अघि बढेको छ ।
उनको सत्कार्यको पहिचान र सम्मानका लागि र राज्यले स्वामित्व लिन पनि राष्ट्रिय स्तरमा वैज्ञानिक विधिसम्मत तथा प्राज्ञिक अध्ययन र अभिलेखनको पहल हुनु आवश्यक छ । योगमायाको समयमा सरकारी स्तरमा भएका पत्राचार, लालमोहर, जेलमा बन्दी बनाउँदा र छोड्दाका कागजात, उनका मागपत्र आदिको खोजी गर्नुपर्छ । बन्दी बनाइएका र जलसमाधिमा गएकाहरूको नाम पत्ता लगाएर तिनको सम्मान र सम्झनामा कुनै सार्वजनिक स्थलमा शिलालेख र स्मारक बनाएर राख्नुपर्छ । यसबाट भविष्यको पुस्ताले गाउँ, समाज र देशको हितमा लाग्न अन्तप्र्रेरणा पाउन सक्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ १२:३४
डोटी — वर्षायामभरि अवरुद्ध ग्रामीण सडक दसैंतिहारलाई मध्यनजर गरी खोलिएको केही दिनमै पुन: वर्षा हुँदा यातायात रोकिएका छन्। बिहीबारदेखि लगातार परेको पानीले पुन: सडक अवरुद्ध हुँदा ग्रामीण भेगतिर आउजाउ असहज भएपछि स्थानीय निराश छन्।
दसंैतिहारका लागि घर फर्किएका गाडी नचल्दा सास्ती भइरहेको दु:खेसो गरिरहेका छन्। सहजपुर–बीपीनगर–बागछेडा र बुडर–बीपीनगर सडकमा सातायता बस गुड्न सुरु भए भए पनि अहिले आउन जान सकेका छैनन्। वर्षाले पहिरो गएको, ठाउँ–ठाउँमा हिलाम्य भएकाले सवारी चल्न नसकेका हुन्। बड्डीकेदार गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले गाउँपालिकाको लगानीबाट सडक मर्मत तथा सरसफाइ गरी सहजपुर–बीपीनगर–बागछेडा सडकमा बस ल्याइपुर्‍याए पनि पानीका कारण पुन: अवरुद्ध भएको बताए। ‘फेरि मर्मत र सरसफाइ गर्नुपर्छ, केही दिनमा गाडी गुडाउँछु,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘दसंै आउन केही दिनमात्र बाँकी छ, धेरैले दु:ख पाउँछन् कि भन्ने पीर छ।’ बुडर–जोरायल सडकमा पनि बस गुडेका छैनन्। जोरायल बस दुर्घटनापछि सडकलाई चौडा पार्ने काम भइरहे पनि हिलो र पहिरोका कारण जोरायल जान सकेका छैनन्। यात्रुहरूको बढी आवतजावत हुने राजपुर–तिखात्तर–चवराचौतारा सडक पनि ठप्प छ। साना जिप गुड्ने उक्त सडकमा सवारी नगुडेपछि दसंै मान्न घर फर्किएकालाई निकै सास्ती भएको छ। भारतबाट फर्किंदा ल्याएका सामान बोक्न नसकिने भएकाले तीन दिनदेखि दिपायलमै थन्किएर बसेको सातफरीका अर्जुन कुँवरले बताए। उनले दिनभरि हिँडेर घर पुग्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले दिपायलमै बस्न बाध्य भएको बताए।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ ११:४०